IHaryana Scholarship 2021/2022 yesicelo sePortal haryana.gov.in: Iindaba zeSikolo sangoku
Njengomfundi ovela eHaryana urhulumente waseHaryana ufundela u-2021 ulapha. Isimahla kwaye ixhaswa ngemali lithuba lemfundo. IHaryana Scholarship 2021 lithuba elihle kuwe.
Nceda uqaphele olu lwazi lubalulekileyo. Urhulumente waseHaryana ubonelele ngenani elifanelekileyo lokufunda. Bajonge iseshoni yezifundo ye-2021/2022.
Kule nqaku uza kufunda:
Malunga neHaryana Scholarship.
Ezinye zeHaryana Scholarship 2021 kunye nendlela yokufaka isicelo.
Ungasifaka njani isicelo seHaryana scholarship 2021 kwi-Intanethi.
Malunga noHaryana Scholarship
IHaryana scholarship luhlobo olwahlukileyo lokufunda. Inikezelwa lisebe lezentlalontle kwiiCaste eziCwangcisiweyo kunye neeklasi eziPhambili. Lo mzimba usebenzisa iindlela ezahlukeneyo. Esi skimu seNtlalontle yeeShedyuli zeCaste kunye neeklasi eziPhambili. Yenzelwe abo bakwisimo saseHaryana.
Umsebenzi ongundoqo weSebe kukulungelelanisa nokongamela imisebenzi yamanye amasebe. Oku kubekwa kweliso kugxile kwimicimbi yokuphunyezwa kwezikimu ezahlukeneyo. Iinkqubo ezenzelwe iNtlalontle yeeCaste ezicwangcisiweyo, iiKlasi eziMva, kunye neZizwe eziDenotified.
Ezinye zeHaryana Scholarship 2021 kunye nendlela yokufaka isicelo
Kuyinyani ukuba uHaryana Indigenes ufumana ukufikelela kwinani elifanelekileyo lokufunda. Oku kungenxa yesebe leeCreads eziCwangcisiweyo kunye neeklasi eziPhambili. Kwakhona ngamanye amaziko. Olunye lwezifundo zabafundi baseHaryana zezi zilandelayo:
IHaryana Post Matric Scholarship yaBafundi beSC
Le yenye yezifundo zaseHaryana 2021. I-Haryana 2021 yokufunda imatriki kwabafundi be-SC iyafumaneka kwabo bafuna ukuba ngabafundi beCaste. Yenzelwe abo bafunda kwiiklasi zasemva kwematriki.
Isixa semali yokufunda siyahluka kwi-Rs. I-230 ukuya kwi-Rs. 1,200 ngenyanga. Kwakhona, oku kusemva kweMatriki ukuya kwiiklasi zePost-Graduate. Nangona kunjalo, esi sikimu sinemilinganiselo yengeniso yosapho. Ingeniso yosapho yabafundi be-ST akufuneki ibe ngaphezulu kwe-Rs. 2.50 lakh ngonyaka.
Okwangoku, abaviwa abafuna ukufaka isicelo seHaryana Post Matric Scholarship yenqaku labafundi be-SC. Ngalo lonke ixesha zama ukukhangela imihla yeefom zesicelo. Kwakhona jonga ukufaneleka kunye nenkqubo yokwenza isicelo.
I-Haryana Post I-Matric Scholarship kubafundi be-OBC
Le yenye yezifundo zeHaryana 2021. IHaryana Post Matric Scholarship yabafundi be-OBC iyafumaneka kubafundi abavela kwezinye iiklasi ezibuyela umva. Yenzelwe abo bathatha iikhosi zasemva kwematriki kurhulumente. Lo rhulumente ukwisikimu sePost Matric Scholarship Scheme saseIndiya. Nangona kunjalo, abaviwa kufuneka babe yindawo yokuhlala yaseHaryana.
Kwakhona, eli xabiso lokufunda lisusela kwi-Rs. I-160 ukuya kwi-Rs. 750 ngenyanga. oku kusemva kweMatriki ukuya kwiiklasi zePost-Graduate. Nangona kunjalo, esi sikimu sinemilinganiselo yengeniso yosapho. Ingeniso yosapho yabafundi be-ST akufuneki ibe ngaphezulu kwe-Rs. 1 lakh ngonyaka.
Abaviwa abafuna ukufaka isicelo seHaryana Post Matric Scholarship mabaqaphele. Ngalo lonke ixesha zama ukukhangela imihla yeefom zesicelo. Kwakhona jonga ukufaneleka kunye nenkqubo yokwenza isicelo.
INkqubo edityanisiweyo yeSampend yabaFundi be-SC, eHaryana
Le yenye yokufunda eHaryana ye-2021. Urhulumente waseHaryana ubonelela ngezi zifundo. Iyafumaneka kubafundi be-SC. Nangona kunjalo, ukuze ulungele ukufumana lo msebenzi wokufunda, kufuneka ube ulandela isidanga sokuqala okanye isidanga sokuqala. Oku kufanele ukuba kuvela kwiyunivesithi eyaziwayo ngurhulumente eHaryana.
Kwakhona, kuya kufuneka wenze ubuncinci i-60% yokubakho eklasini. Isifundi sinikezela ngenkcitho yenyanga ye-INR 1,000. Inika isibonelelo sokuthengwa kweencwadi ze-INR 2,000. Ixesha lesicelo sale mali yokufunda liphakathi kukaJanuwari ukuya kuFebruwari. Oku kwenzelwa unyaka nonyaka.
Ngapha koko, kuya kufuneka ufake isicelo kwi-Intanethi kwesi sibonelelo. Ndwendwela iwebhusayithi esemthethweni yeSebe leMfundo ePhakamileyo, URhulumente waseHaryana. Nangona kunjalo, kwinkqubo yokwenza isicelo, uya kubonelela ngesiqinisekiso seCaste. Kwakhona, kuya kufuneka ubonelele ngesiqinisekiso sokuhlala eHaryana. Ukongeza, uza kubonelela ngeSatifikethi soviwo lokugqibela oludlulisiweyo.
I-Haryana NTSE yabafundi beBanga le-10 (Abafundi abaPhezulu)
Le yenye yokufunda eHaryana 2021. Kubalulekile ukuba uqaphele oku. IHaryana NTSE luvavanyo lokufunda kwabafundi beBanga le-10. I-NTSE (uVavanyo lweeTalente zoPhando lweeTalente zeSizwe) kwizigaba ezibini. Abafundi abakulungeleyo ukufumana iHaryana NTSE kufuneka bathathe uvavanyo lweNTSE yeNqanaba 2. Olu vavanyo luqhutywa yi-NCERT.
Kwakhona, abafundi abaphumeleleyo kwizifundo zeNTSE baya kufumana isixa semali yokufunda seRs 1,250 ngenyanga. Oku kwenzelwe iBakala 11 kunye ne-12. Kananjalo baya kufumana i-Rs 2,000 ngenyanga. Oku kwenzelwe iikhosi zesidanga sokuqala kunye nesidanga sokuqala.
Ukongeza, abaviwa abanqwenela ukufaka isicelo se-NTSE Haryana kufuneka badibane ne-NTSE Haryana. Kwakhona, yenza uthethathethwano olufanelekileyo ukuze wazi:
Uyifumana phi ifom yesicelo.
Kwakhona, kumhla, ukufaneleka, kunye nenkqubo yokwenza isicelo.
I-NTSE Scholarship ivulelekile kubo bonke abafundi abakudidi. Oku kubandakanya abafundi kudidi ngokubanzi.
I-Haryana IPOSE Scholarship yabafundi be-BSc
Le yenye yokufunda eHaryana kwi2021. IHaryana State Council yezeNzululwazi kunye neTekhnoloji (HSCST) ibonelela ngePOSE Scholarship. KukuB.Sc. kunye neM.Sc. abafundi. Injongo yale bhasari kukukhuthaza imfundo yesayensi. I-POSE (Ukukhuthazwa kweMfundo yezeNzululwazi) iScholarship inikezelwa kubafundi baseHaryana. Yenzelwe abo bakhetha izifundo ezisisiseko kunye nesayensi yendalo. Oku kwezi khosi zilandelayo:
Unyaka we-3 B.Sc.
Kwakhona, kwiminyaka emi-4 yeB.Sc.
Unyaka we-5 odibeneyo we-M.Sc./MS col
Ukongeza, iminyaka emi-2 M.Sc.
Abafundi abakhethiweyo phantsi kwePOSE Scholarship baya kufumana isixa semali senyanga seRs. 4,000. Eli lixesha le-1, 2 kunye ne-3 ngonyaka. Kwakhona, iRs. 6000 kunyaka we-4 nowama-5.
Ngapha koko, i-POSE Scholarship inikwa abafundi abali-150. Abaviwa abafuna ukufaka isicelo se-POSE scholarship mabaqaphele. Zama ukukhangela POSE imihla yesicelo. Kwakhona jonga ukufaneleka kunye nenkqubo yokwenza isicelo.
I-Haryana NMMS yeCandelo le-8 Students
Le yenye yokufunda eHaryana kwi2021. IHaryana NMMS sisibonelelo esixhaswe embindini. Inika uncedo lwezemali. Olu ncedo lolwabafundi abafanelekileyo kumacandelo abuthathaka kwezoqoqosho. Ijolise ekubancedeni ukuba baqhubeke nezifundo zabo emva kweBanga lesi-8.
Nceda qaphela. Abafundi baseHaryana abafunda kwiKlasi 8 banelungelo lokufaka isicelo. Nangona kunjalo, kuya kubakho iimvavanyo ezimbini. Olu luvavanyo lwamandla engqondo (i-MAT) kunye noVavanyo lokuFunda ngaBuchule (SAT).
Abafundi abakhethwe phantsi kweHaryana NMMS baya kufumana imali yokufunda. Oku kuye kwi-Rs. I-12,000 ngonyaka (i-Rs. 1000 ngenyanga). Ngapha koko, abaviwa abafuna ukufaka izicelo kufuneka baqaphele. Qinisekisa ukujonga imihla yesicelo. Kwakhona jonga ukufaneleka kunye nenkqubo yokwenza isicelo.
Inkqubo ye-HSCST yoHlelo lwe-Ph.D. Abafundi
Le yenye yokufunda eHaryana 2021. Inkqubo yeHSCST Scholarship lithuba elihle kakhulu. Kungenxa yoko abafaki zicelo abanqwenela ukulandela i-Ph.D. kwiYunivesithi yaseHaryana. I-HSCST (IBhunga likaRhulumente lezeNzululwazi kunye neTekhnoloji yeLizwe laseHaryana) amabhaso ophando ngezifundo. Ezi zibonelelo zezabafundi abakhethe i-CSIR-JRF. Kwakhona, zezabo banobuncinci be-CSIR-LS NET.
Inani lale mali yokufunda yi-Rs 18,000 ngenyanga. Eli lixesha leminyaka emibini yokuqala yomncedisi wophando. Kwaye i-Rs 21,000 ngenyanga, ikwangunyaka wesithathu kunye neminyaka elandelayo. Umfundi ufumana ikota yonyaka engama-20000 ee-rupee ezivela eyunivesithi.
Ungasifaka kanjani isicelo seHaryana Scholarship 2021 kwi-Intanethi
Abaviwa abanqwenela ukufaka isicelo seHaryana 2021 Scholarship bangafaka isicelo kwi-Intanethi. Oku kunokwenziwa kwiHaryana portal. Abafakizicelo kufuneka babhalise kwi-Intanethi kwiHaryana Scholarship 2021. Gcwalisa iinkcukacha ezisisiseko njengeenkcukacha zemfundo.
Kwakhona. layisha amaxwebhu kwaye ungenise ifom yesicelo kwi-intanethi ukuze ugcwalise inkqubo yokwenza isicelo. Umhla wokugqibela wokufaka isicelo sale bhasari uboniswa kwiwebhusayithi esemthethweni. Isango lesi sicelo sokufunda kwi-Intanethi yi-haryana.gov.in.
I-FAQs malunga neHaryana Scholarship 2021
Oku kulandelayo zezinye ze-FAQ ezibuzwa malunga neHaryana yezifundo ze2021:
1. Uthetha ngantoni uHaryana Scholarship?
Imalunga nokubonelela ngoncedo lwezezimali kunye noncedo kubemi baseHaryana.
2. Ngubani abaxhasi / ngaba baxhasi bale Scholarship?
Le ngxowa-mali ibonelelwa lisebe lezentlalontle kwiiCaste eziCwangcisiweyo kunye neeklasi eziPhambili. Ikwabonelelwa ngurhulumente welizwe laseHaryana.
3. Zingaphi iiHaryana Scholarship ezikhoyo kwi2021?
Zininzi ezikhoyo. ezinye zazo zezi:
IHaryana Post Matric Scholarship yaBafundi beSC.
Kwakhona, kukho iHaryana Post Matric Scholarship yaBafundi be-OBC.
IHaryana POSE Scholarship yaBafundi be-BSc.
Kwakhona, kukho iHaryana NMMS yaBafundi beKlasi 8.
Ngaphaya koko, kukho iNkqubo yokuBambisana ye-HSCST ye-Ph.D. Abafundi.
Ukongeza, kukho iHaryana NTSE yaBafundi beBanga le-10 (aBafundi ngokuBanzi).
Isikimu esiHlangeneyo sokuHanjiswa kwaBafundi be-SC, eHaryana.
Kwakhona kukho iHaryana State Merit Scholarship.
4. Ngaba umntu unokufaka isicelo kwi-Intanethi kwiHaryana Scholarship
5. Injani inkqubo yokuBhalisa kwi-Intanethi?
Ilula kwaye kulula. Njengoko kunjalo, nceda uqaphele. Abaviwa abanqwenela ukufaka isicelo seHaryana 2021 Scholarship bangafaka isicelo kwi-Intanethi. Oku kunokwenziwa kwiHaryana portal. Abafakizicelo kufuneka babhalise kwi-Intanethi kwiHaryana Scholarship 2021.
Gcwalisa iinkcukacha ezisisiseko njengeenkcukacha zemfundo. Isango lesi sicelo sokufunda kwi-Intanethi yi-haryana.gov.in.
Isishwankathelo, lixesha elifanelekileyo kubemi baseHaryana. Kwakhona lithuba elihle kubemi baseHaryana abanenjongo yokuqhubela phambili imfundo.
Ngapha koko, kuyacetyiswa ukuba ukuba unomdla kwezifundo zingentla uyaphanda. Kwakhona, ukhululekile ukuba ubhalise / wabelane ngolu lwazi kumaqonga akho eendaba ezentlalo. Unokuba unceda umntu oyifunayo.
Uyilo kunye nokusetyenziswa kweModeli eyakhiweyo engaphantsi komhlaba oManzi oManzi ukuNyanga amanzi amdaka eTannery ngeendlela zezityalo zasemanzini
Isicelo seVisa saseBrunei kwi-Intanethi kunye neeMfuno eziGcweleyo zoHlaziyo lwe2020
Mbaawa Street Zip / Iikhowudi Zeposi
I-Ocheph Consulting yokuGaya ngokuNqunyelweyo 2020/2021 Ifom yesicelo seFortal
Faka isicelo kwiziko laseGraham iScholarship yaBafundi abaDlulileyo kwiYunivesithi yaseCharles Sturt Australia
IiKhalenda eziHlaziyiweyo zeAAU zekota 2019/2020 & 2020/2021
IPortal yokuGaya ootitshala baseLagos State 2021 www.lagosstate.gov.ng
« I-7 eyona nto ndifuna ukuyifunda kwamanye amazwe nge-Free Scholarship 2021/2022 Portal
Ifom yoBhaliso ye-JAMB ye-UTME 2021 Jonga indlela yokuthenga ifom kunye nokufaka isicelo »
Julayi 2021 Imithandazo ekhuthazayo yokuKhusela abaThandekayo bakho
Imibuzo yeSampulu ye-WAEC 2021 kunye neeSikimu zaso sonke iSifundo
Ukuqeshwa kwabafundisi-ntsapho baseKaduna 2021/2022 Jonga iPortal yeSicelo samva nje
Ukuqeshisa kwexabiso eliphantsi kweemoto: Apho ukurenta iiMoto zoMgangatho ngamaxabiso afikelelekayo 2021
NgoJulayi 2021 Iminqwenelo emnandi yoSuku lokuzalwa nawo wonke umntu
I-Altara Credit limited Job Portal 2021 www.altaracredit.com
I-Altara Credit Limited Ukuqesha i-2021/2022 Ifom yesicelo
Ukuqashwa kweBhanki yeWema 2021/2022 Jonga iPortal yokuhlaziya isicelo
Ifomu yokuNikwa abasebenzi baseNigerian Air Force DSSC ifomu 2021 www.airforce.mil.ng/apply-now
I-TSB yokuGaya iDashboard 2021 Jonga imeko yesicelo
Jonga umrhumo wesicelo seVisa kuwo onke amazwe uhlaziyo lwe-2021
nafrecruitment.airforce.mil.ng Login Portal 2021 Isikhokelo sesicelo
Faka isicelo ngoku kuMkhosi woMkhosi woMoya waseNigeria kwi-DSSC 2021
I-Nigerian Airforce DSSC yokuGaya 2021/2022 Jonga iFom yeSicelo sePortal
I-WAEC ye-GCE yeSayensi yezoLimo yeSampuli 2021 Jonga isampuli epheleleyo
I-WAEC ye-GCE yeFiziksi yeFiziksi 2021 Jonga iNkqubo eSebenzayo
IKhomishini yeNkonzo eKhawulezayo yeNkonzo (DSSC) Iimfuno zePara-emkhosini
Ingqinisekiso yeBhanki yeTrusty Ukuqeshwa kwakhona kwe-2021/2022 Ifom yesicelo seFortal
IWema Bank Plc yokuGaya iPortal 2021 Ndwendwela www.wemabank.com
Indawo yokuNgena eGtbank www.gtbank.com Jonga uHlaziyo lokuGaywa kwakhona ngo-2021